Mamorona tapakila fitsapana ho an'ny Passbook | Vaovao IPhone
Pablo Ortega | | Fampianarana sy torolàlana
Raha manana ny iOS 6.0 beta napetraka ianao dia azo antoka fa niditra Passbook, ilay rindranasa Apple teratany vaovao mamela antsika hitahiry ny tapakilanay sy mandalo. Rehefa manokatra ny rindrambaiko isika dia mahita efijery mijoro izay tsy afaka manao na inona na inona. Apple mandritra izao fotoana izao dia tsy te-hampahafantatra bebe kokoa momba ny fampiharana azy, fa efa misy sehatra izay hanampy antsika hamorona fitsapana fitsapana handraisana ireo dingana voalohany amin'ny Passbook.
Raha mpamorona ianao, na mpampiasa liana fotsiny te hanomboka hanandramana amin'ny Passbook, mankanesa ao amin'ny tranonkala PassSource avy amin'ny iPhone ka hatramin'ny mamorona pass na fidirana fitsapana. Amin'ny Internet dia ho hitanao fa manana safidy marobe ianao, toy ny famoronana tapakila fiaramanidina na tapakila. Safidio ny singa tianao hamoronana.
Ao anatin'ny saha izay anoloran'ny pejy antsika, azontsika atao ny mampiditra ny fampahalalana tadiavintsika ary manantona azy amin'ny fotoana rehetra. Vantany vao niditra ny angon-drakitra, hisokatra mivantana eo amin'ilay rindranasa ny fandalovanay Passbook. Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny manova ireo masontsivana niditra avy amin'ilay rindrambaiko ary manavao ny vaovao amin'ny alàlan'ny fikororohana ny efijery iPhone fotsiny.
Azonao atao koa ny mampavitrika ny Notifications mba hampandrenesin'ny app anao rehefa tonga ny fotoana tokony handosiranana na handefasana sarimihetsika.
Fanazavana fanampiny- Passbook, ny kitapom-bolan'ny Apple amin'ny ho avy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Mamorona tapakila fitsapana ho an'ny Passbook maimaim-poana
Mbola tsy vitako ny nanamboatra ny rindranasa rehefa noforonina ny tapakila. video. tamin'ny fomba nandinihany ny iray amin'ireo diksionera izay maneho hevitra? , ary zavatra iray hafa nijanonan'ny wifi, naveriko indray ary tsy mamela ahy hampihetsika ny wifi intsony aho.
fr0sky dia hoy izy:
Toy izany koa no nitranga tamiko. Ny vahaolana, somary tsy mitombina nefa mandeha, dia ny manokatra ny .pkpass miaraka amina fampiharana hitantanana rakitra, mampiasa FileApp aho. Rehefa tonga any aho dia mandefa ilay rakitra amiko amin'ny alàlan'ny mailaka ary rehefa manokatra azy amin'ny mailaka aho, voila dia misokatra ao amin'ny PassBook. Raha ny fahitana azy dia bibikely izay tsy miseho amin'ireo safidy Passbook rehefa mamoaka izany avy amin'ny PassSource.com.
Mamaly an'i fr0sky
Ah ok misaotra, nieritreritra zavatra toy izany aho saingy tsy nanao izany, ho hitako ny maha-izy azy.
Ity tranonkala ity dia mandiso ahy amin'ny safira ipad sy iphone…. Hafahafa tokoa ... Fantatrao ny zavatra iray? Nivoaka ho toy ny kinova finday izy io, saingy tsy misy vaovao na zavatra hafa….